'बिम्स्टेक सैन्य अभ्यासमा असहभागिता, भारतलाई नेपालको आघातपूर्ण तिरस्कार!' :: PahiloPost
'बिम्स्टेक सैन्य अभ्यासमा असहभागिता, भारतलाई नेपालको आघातपूर्ण तिरस्कार!'
11th September 2018, 04:02 pm | २६ भदौ २०७५
सोमवार पुणेमा सैन्य अभ्यासको शुरुवात। फोटो: hindustantimes.com
प्रतिवद्धताका बाबजुद पनि अन्तिम समयमा नेपाल सैन्य अभ्यासबाट ब्याक हुँदा भारत असन्तुष्ट भएको हिन्दुस्तान टाइम्सले जनाएको छ। पत्रकार प्रशान्त झाले पछिल्लो विकास क्रमसँग नजिक रहेका जानकार रहेका व्यक्तिलाई उद्धृत गर्दै नेपालको निर्णय असान्दर्भिक तथा नेपालले दिएको 'आन्तरिक राजनीतिक दबाब'को कारणसमेत विश्वासयोग्य नभएको भन्दै दिल्लीले काठमाडौंसँग असन्तुष्टि व्यक्त गरेको लेखेका छन्।
नेपालको यो कदमले कुटनीतिक रुपमा नकरात्मक सन्देश जाने नेपालका लागि एक पूर्व भारतीय राजदूतले बताएको समाचारमा उल्लेख छ। 'नेपालले एकतिर चीनसँग चिनियाँ बन्दरगाह प्रयोगका लागि प्रोटोकलमा हस्ताक्षर गरेको छ। अर्कोतिर भारतमा आयोजना भएको सैन्य अभ्यासमा सहभागी हुनबाट पछि हटेको छ। यो सन्देश ठिक होइन्, 'ती राजदूतले भनेका छन्।
'यस किसमको अविवेकी कदमको मूल्य नेपालले भविष्यमा आइपर्ने संकटमा देखापर्ने छ। उनीहरुले (नेपालले) भारतसँगको सम्बन्धलाई मजबुद बनाउनुपर्छ नकी अविश्वास पैदा गर्नुहुन्छ,' उनले भनेका छन्।
'बिम्स्टेक सैन्य अभ्यासबाट पछि हट्ने नेपालको यो निर्णय पछाडि धेरै कारणहरु छन्। अधिकांशहरु आवश्कयता बिनाका छन्। तर, यसले भारतका लागि एउटा पाठको रुपमा काम गरेको छ,' नयाँ दिल्लीस्थित फरेन पोलिसी स्टडिजका फेलो कन्स्टान्टिनो जेभियरले भनेका छन्।
'बिम्स्टेक सैन्य अभ्यासमा असहभागिता, भारतलाई नेपालको आघातपूर्ण तिरस्कार!' को लागी कुनै प्रतिक्रिया उपलब्ध छैन ।